तपाईं भन्नुहुन्छ, प्रभु येशू एक चिनियाँ व्यक्तिको रूपमा, देहमा फर्केर आउनुभएको छ। हामी त्यो कुरा स्वीकार गर्न सक्दैनौं। बाइबलमा जे लेखिएको छ त्यसअनुसार, प्रभु येशू एक यहूदीको रूपमा प्रस्थान हुनुभयो, त्यसैले जब प्रभु आखिरी दिनहरूमा फर्केर आउनुहुन्छ, त्यसबेला उहाँ एक यहूदीको रूपमा आउनुपर्छ भन्‍ने हामी विश्‍वास गर्छौं। उहाँ कसरी एक चिनियाँ व्यक्तिको रूपमा आउन सक्नुहुन्छ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
अघिल्लो: तपाईंले आखिरी दिनका परमेश्‍वर एउटी महिलाको रूपमा देहधारण हुनुभएको छ भनी गवाही दिनुहुन्छ। हामी त्यो कुरा स्वीकार गर्न सक्दैनौं। बाइबलमा लेखिएको छ, कि येशूले स्वर्गका परमेश्‍वरलाई पिता भन्नुभयो, र स्वर्गका परमेश्‍वरले येशूलाई प्रिय पुत्र भन्नुभयो। के पिता र पुत्रहरू पुरुष होइनन् र? बाइबलले यो पनि भन्छ कि, “स्‍त्रीको शिर पुरुष हो” (१ कोरिन्थी ११:३)। त्यसैले महिलाहरूको कुनै अधिकार हुँदैन, त्यसो भए तपाईंले किन आखिरी दिनका परमेश्‍वर एउटी महिलाको रूपमा देहधारण हुनुभएको छ भनी भन्नुहुन्छ?
अर्को: अनुग्रहको युगको दौरान, परमेश्‍वर देह बन्नुभयो र मानवजातिका लागि पापको एउटा बलिको रूपमा काम गर्नुभयो, त्यसरी मानवजातिलाई पापबाट छुटकारा दिनुभयो। परमेश्‍वर आखिरी दिनहरूमा फेरि देह बन्नुभएको छ। उहाँले सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ र न्यायको काम गर्नुहुन्छ, यसरी मानवजातिलाई पूर्ण रूपमा शुद्ध पार्नुहुन्छ र मानवजातिलाई शैतानको प्रभावबाट बचाउनुहुन्छ। मानवजातिलाई मुक्ति दिने काम गर्न उहाँ किन दुई पटक देह बन्नु पऱ्यो? यी दुई देहधारणको वास्तविक महत्त्व के हो?